IWCA Summer Institute - International Writing Centers Association
Fikambanan'ny ivon-toerana manoratra iraisam-pirenena
Ireo singa mifandraika amin'ny IWCA
Fitsipika sy lalàm-panorenana
Konferansa isan-taona IWCA
Herinandron'ny ivon'ny fanoratana iraisam-pirenena
Ivontoerana fahavaratra IWCA
Archive an'ny fisehoan-javatra taloha
Gazety fanoratana Center
Ny famerenana ny peer
Ny fanomezana sy ny loka
Loka ho an'ny mpitarika ho avy IWCA
Loka natokana ho an'ny lahatsoratra IWCA
Loka miavaka amin'ny IWCA
Muriel Harris loka miavaka
Fanomezana fikarohana IWCA
Fanomezana ho an'ny mpikaroka Ben Rafoth
Fanomezana ny disertation IWCA
Fanomezana fitsangatsanganana IWCA
Programan'ny Mentor Match
Manomeza ho an'ny IWCA
Hetsika IWCA mpanohana
Virtual, 13-17 jona 2022
Misoratra anarana hatramin'ny 15 aprily amin'ny https://iwcamembers.org/
Vidin'ny fisoratana anarana: $400
Famatsiam-bola voafetra azo - fangatahana amin'ny Aprily 15
Misoratra anarana amin'ny https://iwcamembers.org/. Safidio ny 2022 Summer Institute. Ilaina ny maha-mpikambana ao amin'ny IWCA.
Ny IWCA Summer Institute amin'ity taona ity dia azo fintinina amin'ny teny efatra: virtoaly, manerantany, miovaova ary azo idirana. Miaraha aminay amin'ny Institiota fahavaratra virtoaly faharoa 13-17 jona 2022! Ny SI amin'ny fomba mahazatra dia fotoana hialan'ny olona amin'ny andraikiny isan'andro ary hivondrona ho vondrona, ary na dia miankina aminao aza ny halaviranao amin'ny raharaha ara-tontolo iainana, ny vondrona amin'ity taona ity dia hankafy ny fahafahana mifandray saika amin'ireo matihanina foibe fanoratana manerana an'izao tontolo izao. Ho an'ny dikan-teny printy, tsindrio ny 2022 SI Description. Tahaka ny tamin'ny taona lasa, ny mpandray anjara dia afaka miantehitra amin'ny traikefa mba hampidirana fifangaroana malalaka:
Fotoan'ny tetikasa tsy miankina
Fiaraha-mientana ho an'ny tsirairay sy vondrona kely
Fifandraisana amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona
Vondrona tombontsoa manokana
Hetsika hafa mahaliana
Fandaharam-potoana isan'andro an'ny Time Zones
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba izay kasain'ny mpikarakara sy ny mpitarika fivoriana ho anao ianao, dia zahao ireo fandaharam-potoana, izay manome làlan-kaleha isan'andro. Ho an'ny mahamety anao, namboarina manokana izy ireo amin'ny faritry ny fotoana 4 samihafa. Raha tsy omena eto ny anao dia mifandraisa amin'ireo mpikarakara, izay hanome anao iray manokana ny toerana misy anao.
Ny ora atsinanana
Ny atrikasa rehetra dia hatao amin'ny alàlan'ny sehatra fifampiresahana mivantana sy fampivoarana matihanina ary ny fitaovana hafa dia ho azo asynchronously. Noho ny vidiny ambany kokoa amin'ny fampiantranoana ny SI saika, $400 fotsiny ny fisoratana anarana (matetika, $900 ny fisoratana anarana). Fisoratana anarana 40 ihany no ho raisina. Hanomboka lisitra miandry isika aorian'ny fisoratana anarana faha-40.
Refund Policy: Ny famerenam-bola feno dia hisy hatramin'ny 30 andro alohan'ny hetsika (13 Mey), ary ny antsasaky ny famerenam-bola dia afaka 15 andro alohan'ny hetsika (29 Mey). Tsy hisy famerenam-bola aorian'izay.
Alefaso azafady Joseph Cheatle amin'ny jcheatle@iastate.edu ary/na Genie Giaimo at ggiaimo@middlebury.edu misy fanontaniana.
Raha te hisoratra anarana ianao nefa mbola tsy mpikambana dia misoratra anarana amin'ny kaonty IWCA mpikambana ao amin'ny https://iwcamembers.org/, Avy eo safidio ny 2022 Summer Institute.
Joseph Cheatle (izy/izy) dia Talen'ny Foiben'ny Fanoratana sy Media ao amin'ny Oniversiten'i Iowa ao Ames, Iowa. Talen'ny Associate of The Writing Center tao amin'ny Michigan State University izy teo aloha ary niasa ho mpanolo-tsaina matihanina tao amin'ny Case Western Reserve University ary mpanolo-tsaina mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite Miami. Ny tetik'asa fikarohana ataony amin'izao fotoana izao dia mifantoka amin'ny antontan-taratasy sy fanombanana amin'ny foibe fanoratana; indrindra indrindra, liana izy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fanaon'ny antontan-taratasy ankehitriny mba hiteny amin'ny fomba mahomby kokoa sy amin'ny mpihaino midadasika kokoa. Anisan'ny ekipa mpikaroka nijery ny antontan-taratasin'ny foibe fanoratana nahazo ny loka International Writing Centers Association Outstanding Research Award. Navoaka tao amin'ny fampiharana, WLN, ary ny Journal of Writing Analytics, kairos, The Gazety fanoratana Center, ary ny Journal of College Student Development. Amin'ny maha-mpitantana azy dia liana amin'ny fanomezana fahafaha-manao fampandrosoana matihanina ho an'ny mpiasa sy mpanolo-tsaina izy amin'ny endrika fikarohana, famelabelarana ary boky. Liana ihany koa izy amin'ny fomba hanomezana fanohanana feno ho an'ny mpianatra amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka ao amin'ny campus sy ny tolo-kevitra momba ny loharanon-karena. Solontenan'ny At-Large tao amin'ny Birao IWCA teo aloha izy, mpikambana taloha tao amin'ny Biraon'ny Fikambanan'ny Foiben'ny Fanoratra Atsinanana Afovoany, ary filoha mpiara-miasa teo aloha tao amin'ny IWCA Collaborative @ 4Cs. Izy koa dia filohan'ny Summer Institute 2021 niaraka tamin'i Kelsey Hixson-Bowles. Nanatrika ny Summer Institute tao 2015 tany East Lansing, Michigan izy teo aloha.
Genie Nicole Giaimo (SI Co-Chair, izy ireo) dia Profesora mpanampy sy Talen'ny Foibe fanoratana ao amin'ny Middlebury College any Vermont. Ny fikarohana ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao dia mampiasa maodely quantitative sy qualitative mba hamaliana fanontaniana maro momba ny fitondran-tena sy ny fanao ao amin'ny foibe fanoratana sy ny manodidina, toy ny fihetsiky ny mpampianatra momba ny fahasalamana sy ny fomba fikarakarana tena, ny fandraisana anjaran'ny mpampianatra amin'ny antontan-taratasy momba ny foibe fanoratana, ary ny fomba fijerin'ny mpianatra ny foibe fanoratana. . Miorina ao Vermont amin'izao fotoana izao, ny Genie dia tia milomano amin'ny rano misokatra, mandeha an-tongotra ary misolovava ny fomba fiasa ara-drariny any amin'ny toeram-piasana amin'ny fampianarana ambony. Izy ireo dia namoaka in fampiharana, Journal of Writing Research, Ny Journal of Writing Analytics, Fampianarana teny anglisy tao amin'ny kolejy roa taona, Fikarohana momba ny fampianarana momba ny literatiora an-tserasera, kairos, Manerana ny Disciplines, Journal of Multimodal Rhetoric, ary ao amin'ny fanangonana maromaro navoaka (Utah State University Press, Parlor Press). Ny bokin'izy ireo voalohany dia ny fanangonana namboarina Fahasalamana sy fiahiana amin'ny asan'ny foibe fanoratana, tetikasa nomerika misokatra malalaka. Ny bokin'izy ireo amin'izao fotoana izao, Tsy salama: Mitady fahasalamana ao amin'ny Foibe fanoratana Neoliberal sy any ivelany dia eo ambany fifanarahana amin'ny Utah State UP.
Mpitarika ny Summer Institute:
Jasmine Kar Tang (izy) dia liana amin'ny fijerena ny endriky ny fihaonan'ny vehivavy feminisma miloko sy ny fianarana foibe fanoratana amin'ny fifampidinihana amin'ny fanoratana, ny fanaraha-maso, ny fanamorana ny vondrona, ary ny minutiae amin'ny asa fitantanana. Ny zanakavavin'ireo mpifindra monina avy any Hong Kong sy Thailandy, dia nieritreritra momba ny lafiny ara-sosialy ara-tantara amin'ny fomba nampiharana ny fahefana ara-poko ao amin'ny vondron'olona Aziatika ao amin'ny foibe fanoratana amerikana. Jasmine dia miasa ao amin'ny Oniversiten'i Minnesota–Twin Cities amin'ny maha-mpitantana ny Foibe momba ny fanoratana sy ny Tetikasa fanoratana Minnesota ary amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Faculty Graduate Affiliate amin'ny fianarana mamaky teny sy manoratra sy rhetorical. Jasmine koa dia mampihatra ny fiofanany amin'ny andraikiny amin'ny maha-dramaturg an'ny Aniccha Arts, fiaraha-miasa ara-javakanto andrana ao amin'ny Twin Cities.
Eric Camarillo (izy/izy) dia Talen'ny Learning Commons ao amin'ny Harrisburg Area Community College izay manara-maso ny fitsapana, ny tranomboky, ny fanohanan'ny mpampiasa ary ny tolotra fampianarana ho an'ny mpianatra 17,000 mahery amin'ny tobim-pianarana dimy. Ny fandaharam-pikarohana ataony dia mifantoka amin'ny foibe fanoratana sy fomba fanao tsara indrindra ao anatin'ireo habaka ireo, ny fanoherana fanavakavaham-bolon-koditra raha mihatra amin'ny fomba fanoratana foibe, ary ny fiovan'ireo fomba fanao ireo amin'ny fomba an-tserasera asynchronous sy synchronous. Navoakany tao amin'ny The Peer Review, Praxis: Journal of Writing Center, ary Ny Journal of Academic Support Programs. Izy dia nanolotra ny fikarohana nataony tamin'ny fihaonambe maro anisan'izany ny International Writing Center Association, ny Mid-Atlantic Writing Center Association, ary ny Conference on College Composition and Communication. Izy amin'izao fotoana izao no Filohan'ny Kaonferansa Nasionaly momba ny Fampianarana Mpampianatra amin'ny Fanoratra sy ny Tonian-dahatsoratra momba ny Boky The Writing Center Journal. Kandidà dokotera ao amin'ny Texas Tech University ihany koa izy.
Rachel Azima (izy/izy) dia amin'ny fahafolo taonany amin'ny fitarihana foibe fanoratana. Amin'izao fotoana izao, izy dia talen'ny Ivotoeram-panoratana sy Profesora mpiara-miasa amin'ny fampiharana ao amin'ny Oniversiten'i Nebraska-Lincoln. Rachel dia Chair Emeritus ao amin'ny Birao Mpanatanteraka Fikambanana Midwest Writing Centers ary solontenan'ny MWCA ho an'ny IWCA. Ny fikarohana voalohany nataony sy ny fahalianany amin'ny fampianarana dia ara-tsosialy, indrindra fa ny fanavakavaham-bolon-koditra, ny rariny amin'ny foibe fanoratana. Ny asan'i Rachel dia niseho vao haingana tao amin'ny Gazety fanoratana Center ary ho avy amin'ny roa tonta WCJary fampiharana. Ny tetikasam-pikarohana fiaraha-miasany amin'izao fotoana izao miaraka amin'i Kelsey Hixson-Bowles sy Neil Simpkins dia tohanan'ny IWCA Research Grant ary mifantoka amin'ny traikefan'ireo mpitarika ny loko amin'ny foibe fanoratana. Miara-miasa amin'i Jasmine Kar Tang, Katie Levin, ary Meredith Steck ao amin'ny CFP ihany koa izy ho an'ny fanangonana namboarina momba ny fanaraha-maso foibe fanoratana.
Violeta Molina-Natera (izy) manana Ph.D. amin'ny fanabeazana, MA amin'ny Linguistics sy Espaniola, ary mpitsabo kabary. Molina-Natera dia Profesora mpiara-miasa, mpanorina sy talen'ny Javeriano Writing Center, ary mpikambana ao amin'ny Vondrona Fikarohana momba ny Serasera sy ny Teny ao amin'ny Pontificia Universidad Javeriana Cali (Kolombia). Izy no mpanorina sy filoha taloha tao amin'ny Tambajotran'ny Ivotoeram-panoratana sy Fandaharana any Amerika Latina RLCPE, mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny: International Writing Center Association IWCA, misolo tena an'i Amerika Latina, Fikambanana Amerika Latina momba ny Fianarana soratra amin'ny Fampianarana ambony sy ny toe-javatra matihanina ALES, ary Transnational. Consortium Fikarohana fanoratana. Molina-Natera dia tonian-dahatsoratra ho an'ny lahatsoratra amin'ny teny espaniola ihany koa ho an'ny fizarana Amerika Latina amin'ny International Exchanges momba ny fandalinana ny fanoratana ny WAC Clearinghouse, ary koa mpanoratra lahatsoratra sy toko boky momba ny foibe fanoratana sy fandaharanasa fanoratana.
Mamorona tranokala na bilaogy ao amin'ny WordPress.com
Mandefa ny fanehoan-kevitra ...
Manorata hevitra ...